Wefti Xukuumadda ka tirsan oo gaadhay Ceerigaabo, kana hadlay shir beeleed ka furmaya magaalada | Somaliland.Org
Weftiga Wasiirka Daakhiliga waxa duleedka Magaalada Ceerigaabo kaga hortagay Maamulka gobolka iyo degmada Ceerigaabo, Salaadiin, Boqoro, Cuqaal iyo madaxda laamaha dawladda ee gobolka Sanaag, kuwaasi oo Wasiirka iyo Guddoomiyaha Baanka dhexe u soo galbiyay dhinaca magaalada gudaheeda oo uu muddo dhex marayay, ka dibna waxa la dejiyay Guriga martida ee magaaladaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Md. Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo ka hadlay halkaasi ayaa si weyn ugu mahad celiyay salaadiinta, boqoradda iyo dadweynihii tirada badnaa ee ku soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo.
Wasiirku wuxuu sheegay inaanu socdaalkani ahayn kii u horeeyay ee uu ku yimaado magaalada Ceerigaabo, waxaanu tilmaamay inuu billo ka hor muddo ku sugnaa isla markaana uu nabad- ka dhex abuuray laba beelood oo reer Ceerigaabo ah oo shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac ay dhex martay. Waxaanu bogaadiyay madax-dhaqameedka iyo dadweynaha uu xusay inay gacan weyn ka geysteen nabadeyntii beelaha waqooyiga iyo koonfurta Ceerigaabo.
“Arrinta labaad ee jirtaa waxa weeye arrimaha shirka beelaha Habar-yoonis, hore waxaanu ula kulanay Gudidii qaban-qaabadda ee waday hawshaasi waxaanan ku balansanayn in doorkii odaytinimo ee aanu lahayn ka geysano shirkan. Waxaanu nahay niman masuuliyiin ah oo xil haya. Tallo wadaagna beeshooda la leh. Waxaanay noqonaysaa inaanaan marnaba shirkaasi ka maqnaan doonin haddii ay tahay tallo iyo tusaaleba,”ayuu yidhi Wasiirka Daakhiligu.
Wasiirku wuxuu sheegay inaanay u socon inay wax dhib ah kala hor-tagaan shirkan oo lagu kala qeybsan yahay.
Waxa kale oo xubin ka ah weftigan oo hore ugu sii sugnayd magaalada Ceerigaabo Wasiir Ku xigeenka caafimaadka Somaliland Marwo Nimco Xuseen Qawdhan.
Previous PostSuldaan Xisbiyadda u soo jeediyay inaanay Hargeysa u soo sharixin cid aan ahayn beelaha deegaankaNext PostPuntland iyo Kooxda Cali Khaliif oo niyad jab weyn ka qaaday kulankii labada Madaxweyne	Blog